Kulanka Furitaanka La Liga Ee Bilbao, Xaalada Lionel Messi, Wararka Neymar Jr Iyo Waxyaabihii Uu Ernesto Valverde Ka Hadlay Ka Hor Kulanka San Mames. - Gool24.Net
Kulanka Furitaanka La Liga Ee Bilbao, Xaalada Lionel Messi, Wararka Neymar Jr Iyo Waxyaabihii Uu Ernesto Valverde Ka Hadlay Ka Hor Kulanka San Mames.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa qabtay shirkiisii jaraa’id ee ugu horeeyay ee bilawga xili ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga iyada oo barri oo khamiis ah uu si rasmi ah u furmi doono tartanka La Liga.
Valverde ayaa ka hadlay waxyaabo badan iyada oo su’aalo laga waydiiyay xaalada Lionel Messi oo ka shaqaynaya in uu ka soo kabsado dhaawicii soo gaadhay waxaana sidoo kale wax laga waydiiyay wada xaajoodkii Neymar Jr lagu soo celinayay.
Dhinaca kale Valverde ayaa walaac xoogan ka muujiyay in suuqa kala iibsigu furnaado waqtiga uu xili ciyaareedka cusubi furmayo wuxuuna taageeray qorshaha kooxaha Premier league uu suuqoodu ku xidhmo maalin ka hor bilawga xili ciyaareedka cusub.
Valverde ayaa sidoo kale ka walwalsan xaalada ay kooxdiisa Barcelona ugu bilaabanayso horyaalka La Liga maadama oo uu ogyahay halista garoonka San Mames ay ku leedahay kooxdiisii hore ee Athletic Bilbao.
Ernesto Valverde oo ka hadlaya kulanka Athletic Bilbao ee ay habeen danbe ugu bilaaban doonana horyaalka La Liga ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waa kulan aad u adag in lagu bilawdaa. Waxaanu ognahay awooda Athletic ee San Mames. Anigu waxaan ogahay in dhawaan uu kulankii ugu horeeyay horyaalku halkaas ahaa”.
“Xaqiiqdii waxaanu doonaynaa in aanu si fiican ku bilaabano isla markaana aanu u dhaqaaqno horyaalkii saddexaad oo xidhiidh ah, taas oo ah wax naadir ah ama aan markastaba dhicin” ayuu Valverde hadalkiisa raaciyay.
Valverde ayaa la waydiiyay xaalada Neymar Jr wuxuuna ku jawaabay: “Anigu waxaan iska reebay dhibaatooyinka oo dhan.Waxa kaliya ee aan diirada saarayaa waa ciyaartoyda aan haysto. Anigu waxaan ixtiraamaa ciyaartoyda kooxaha kale, isagu waxa uu joogaa PSG. Waxaan ku faraxsanahay kooxda aan haysto”.
Laakiin Valverde ayaa ka soo horjeeda in suuqa La Liga uu sii furnaado iyada oo xili ciyaareedka uu bilaamayo wuxuuna yidhi: “Waxa caadiga ahi waa in suuqu joogsado marka uu horyaalku bilawdo. Wax caadiya ma aha in aanu xili ciyaareedka bilaabanayno iyada oo suuqu uu socdo”.
“15 kaas maalmood waxay noqon doonaan kuwo hubanti la’aan ah, mana fiicnaan doonaan, waxaa waajib ah in ay noqoto sida Premier league” ayuu Valverde hadalkiisa ku sii daray.
Ugu danbayn Valverde ayaa cadeeyay in aanu wax halis ah galin doonin Lionel Messi kulanka furitaanka La Liga ee Bilbao wuxuuna yidhi:”Anagu ma doonayno in aanu ciyaartoy halis galino. Messi aan kalidii u dayno, isagu wali kooxda lamuu tababaran. Tababarashadu lama mid aha kulan ciyaaris”.